सलामी, गुलामी, मलामी | Jwala Sandesh
सलामी, गुलामी, मलामी
| प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर २, २०७६ ::: 128 पटक पढिएको |
संकेत कोइराला -एकपटक मन्दिरको बलेसीमा रहेको ढुंगाले मन्दिरभित्र स्थापित ढुंगाको मूर्तिलाई सोधेछ– ‘साथी तिमी पनि पहाडबाटै झरेको, म पनि पहाडबाटै झरेको, तिमी पनि ढुंगा, म पनि ढुंगा तर पनि मान्छे तिमीलाई रातोदिन पूजा गर्छन, फूलप्रसाद चढाएर ढोग्छन् । तर मभित्र के तेस्तो दोष छ र, हरपल फोहोर खुट्टाको प्रहार खेप्नुपर्छ ।’
मन्दिर भित्रको ढुंगो मन्द मुस्काउँदै जवाफ दिन्छ– ‘हो साथी हाम्रो जात एउटै, थातथलो एउटै हुँदाहुँदा छिनो बजारिँदा भोगिएको पीडा पनि एउटै तर मानिसले तिमीमाथि एक चोट के हिर्काएका थिए, तिमी प्याट्ट फुटेर दुई टुक्रा भयौ । त्यसैले तिमीलाई मानिसले जुत्ता पुछ्ने सिंढी बनाए । हुन त ममाथि पनि छिनोको निर्मम प्रहार भएकै हो तर मैले त्यो असह्य चोट समन गरें । त्यसैले तिमी त्यहाँ छौ म यहाँ छु । सवै चोट खानेहरु सफल हुँदैनन । सफल हुन त चोट खप्न सक्नुपर्छ ।’
स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु दिवंगत हुँदा तीनपुस्ता कोकोहोलो मच्चाउँदै सडकमा निस्कियो । दक्षिण एशियाका नेताहरुमा इतिहासले नेहरुको मरणलाई उच्च सम्मान दिएर मूल्यांकन ग¥यो । नेताले लिएको आदर्श, अडान देशको हितमा कति कालजयी हुनसक्यो भनेर समयको मानकमा उ इस्पात भएर निस्कने हो ।
वास्तवमा नेता पनि ढलोट मूर्तिजस्तै हो । पहिला अविरल अनि निर्मम कुटाई खान्छ, जब भगवानको आकारमा अनुवाद हुन्छ, प्रहार गर्ने नै अन्ततः लम्पसार परेर समर्पित हुन्छ । शक्तिमा हुँदा त स्यालको गर्जन नै काफी छ । यस्तो बेला प्राप्त हुने मलामी भनेको स्वार्थी झुण्ड शिवाय केही होइन । सिनेमाको रंगीन संसारबाट राजनीतिमा हेलिएकी तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जय ललिताको निधन हुँदा अरु ७७ जनाले ज्यान फालेका थिए । विशुद्ध नेता एउटा त्यस्तो ग्रह हो, जो अस्ताउँदा अरु थुप्रै उपग्रहको अन्त्य स्वाभाविक हुन्छ ।
राजनीतिमा सफल क्रान्तिकारी नेताले राजनेताको श्रीपेच धारण गर्छ भने असफल भएमा अपराधी करार हुन्छ । अपराधी हुन मान्छेको शिर ठुन्क्याउनु पर्छ भन्ने होइन, जब सामूहिक अपेक्षा शहीद बनाइन्छ भने त्यो पात्रको भौतिक उपस्थिति पनि निस्सार हुन्छ । जब पुलिसको सुरक्षामा उसको दैनिकी वित्न थाल्छ, उभित्रको नेतृत्व क्षमता धमिरा लागेको बुझ्नुपर्छ ।
इनारमा हालेको बाल्टिन यदि झुक्यो भने पानी भरिएर बाहिर निस्कन्छ । जिन्दगीको गणित पनि यस्तै हो, जो झुक्छ उसले केही प्राप्त गर्छ ।
सम्भवतः अभूतपूर्व हुने अवसर गुमाएर भूतपूर्वमा सीमित हुने हाम्रा ठूला मान्छेहरुलाई पुलिसको पछुवा जरुरी हुनु पछाडिको मनोविज्ञान पनि यही नै हो । यदि देशको नक्सा, झण्डा, राष्ट्रिय गीत नभएर हामी भित्रको मनोविज्ञानलाई सामथ्र्य मान्ने हो भने देशको योग्य नागरिक हुने न्यूनतम योग्यता धेरै नेपालीमा छैन् । देशलाई रत्नपार्कजस्तो मनमौजीको थलो बनाएर रत्यौली खेल्नुलाई नागरिक हुनुको धर्म किमार्थ पूरा हुँदैन । दुखसाथ भन्नुपर्दा अधिकांशको दैनिकी त्यसरी नै वितेको छ ।
कोही नाङ्गो भएर सडकमा देखिएला, कोही बन्द कोठामा अति व्यस्तको नेमप्लेट टाँगेर निर्णय गर्ला तर भीआईपी निर्णय अझ घातक ठहरिने गरेको छ । देश तंग्रिन नसक्दा आफ्ना गहना दिएर सहयोग गर्ने कोरियाली महिलाले देखाएको उदारता हाम्रा कति नारीका लागि सुपाच्य हुन्छ ? देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान कपाल बेचेर इतिहास कोरेका कोरियाली मनोविज्ञान कसका लागि प्रेरक होला ? यहाँ त लोकसेवा पास गरेर देशको चीरहरणमा सहभागी हुने र एजेन्टको काम गरेवापत तनखा लिएर पेट पाल्नेबीच किन्चित अन्तर भेटिन्न । रावणायण लेखिएन, त्यसैले रामायणको प्रचार भयो ।
तर कुनै चेलीलाई सोधिँदा तिमी कस्तो दाजु चाहन्छ्यौ भन्दा नेपाली समाजमा कसैले रावणजस्तो भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । हामी त्यो समाजका उपज हौं, जसलाई क देखि अगाडि र ज्ञ भन्दा पछाडिको संसार खोज्ने न फुर्सद छ, न जाँगर नै । रावण त्यो पात्र हो, जसले बहिनीको अपमान सहन नसकेर राजवंशमा लडाईंको शंखनाद गरेर आपूm नासियो तर सम्झौता गरेन । शत्रुकी पत्नी अपहरण ग¥यो तर छुनु त परै जाओस, अनैतिक सोच्ने संस्कार उ भित्र छँदै थिएन ।
मान्यताका यी ठेली विर्सिएर हामी बच्चाले आमाको दूध चुस्दासमेत महिला अधिकार हनन् हुने कुतर्कतर्पm जाँदैछौं । स्तनपान दिवस मनाउने रहरले कुत्कुत्याउँछ । सत्य चाहिँ के हो भने किराफट्याङ्ग्रा मर्लान भनेर हात्तीले आफ्नो दैनिकीबाट विश्राम लियो भने के हुन्छ ? प्रकृति त प्रकृति नै हो नि– सर्पअघि पक्कै भ्यागुताको जन्म भएको हुनुपर्छ । मृग बाघभन्दा कान्छो पक्कै होइन । माछा बनाएपछि प्रकृतिले बकुल्ला आविष्कार गरेको भनियो भने नजाति हुन्न होला । नियालेर हेरियो भने असम्भावनाभित्र सम्भावना हुन्छ । यदि तपाईं जुनसुकै विषयलाई गहिरो बनाउँदै जानुभयो भने आफ्नो जन्मदिने बाउको अनुहारमा पनि बाँदरको छनक देख्न थाल्नु हुनेछ ।
एक दशकयता भएका राजनीतिक कागतालीको समीक्षा गर्दा छर्लङ्ग हुन्छ– यो देशमा को भयो भन्दा पनि को मन्त्री भएन ? राज्य संयन्त्रमा नालायक मानिसको उपस्थितिलाई समावेशी भनियो । अनुजा बानियाँदेखि कन्चन रेग्मीजस्ता पात्र यही नर्सरीमा जन्माएर अरु मानिस निरपेक्ष बस्यौं । साग बेच्नेले साग बेचेर हैन, सिंहदरबार पुगेर सपना पूरा हुने भाकलमा दिन वितायो । पहिचान हैन अवसर, जात हैन सोच, भाषा हैन शिक्षा, धर्म हैन मानवता, संविधान होइन प्रणाली, भागवण्डा होइन, एकता आजको आवश्यकता हो । तर सत्य बोली हुतिहाराका दैनिकी जस्ता भएका छन् ।
भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थिए । नमाज पढेपछि सितारमा नित्य रामधून बजाउने उनी बाक्लै साधुहरुको सामीप्यमा पुग्थे । उनको मान्यता थियो– ‘महान मानिसहरु धर्मलाई मित्रताको माध्यम बनाउँछन् । छुद्र मानिसहरु यसलाई प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाएर लडाईं झगडामा अग्रसर हुन्छन् ।’ पुस्तकालयमा कुरान, बाइबल र गीताका किताव एउटै खातमा मिलाएर राखिएका हुन्छन् । यी पुस्तक आपैंm लडाईं गरेको उदाहरण कतै भेटिदैन । तर जब धर्मका नाममा विभेदको खेती गर्नेहरुले स्वार्थको रोटी सेकाउन निर्जीव मान्यतामा धावा बोल्ने गरेका छन् । संसारमा भएका धर्मयुद्ध पछाडिको तीतो सत्य यही नै हो ।
कुन धर्मावलम्बीलाई मंसिर–पुसको पारिलो घाम मन पर्दैन ? वास्तवमा सवैलाई उत्तिक्कै प्यारो लाग्ने जाडोको पारिलो घाम चाहिँ धर्म हो । कुवाको पानी र ज्ञान उस्तै हो । जो कहिल्यै झिकेर र बाँडेर रित्तिदैन । कागजमा देश देखिए पनि सार्वभौम मुलुक बनाउने प्रयास सधैं यस्तै तोरीलाउरे काइदाका कारण अद्र्धविराममा टुंगियो । मूल्य पानीको हैन प्यासको, मृत्युको होइन सासको र प्रेमको होइन विश्वासको हुन्छ ।
राजनीतिमा उपयोगवाद कति घातक हुन्छ भन्ने तथ्य आजभन्दा १ सय ६५ वर्ष पहिले राजा राजेन्द्रले जंगबहादुरको उछितो काढ्दै सैनिक पल्टनलाई लेखेको यो चिट्ठीले पुष्टि गर्छ ।
जंगबहादुरको अधिकार कटौति गरिएको उक्त पत्रमा भनिएको छ– ‘जंग्याले मेरा विनाहुकुम भैयाद भारादार मारी उन्का जाहान् बच्चासमेत् मधेशमा धपाउदा र ६ हरुलाई पनि औलामा आफ्ना मनोग्य गरी धपायो. आजकाल अर्काका स्वास्नी पनी टिपि घर लैजांछ भंदा सुनीन्छ . यस्तो निमक्हराम जंग्या हत्यारोलाई मैले मुषती यारीबाट षारीज ग¥या. यस्तो पातकी टाढाका गोतियाहरु र भारदारहरु मान्र्या फेरी आप्mनु आग्या चलाइ हजुरको कामकाजमा हुकुम् चल्दैन भनी जबरदस्ती दुनिञाहरुको सही हलाइ मेरा हजूरमा अर्जी च¥हाइ पठाउन लाउन्या ढुंगाको बीगान्र्या सबै जंग्या हो ।’
कृष्णलाल मारिएपनि उनको लेखनी सत्यबाट डगमगाएको छैन् । मकैको खेती पुस्तकको भूमिकामा भनिएको छ– …. सरकारले आप्mना देशका कुकुरहरु भन्दा विदेशी कुकुरहरुको बढ्ता मान गर्छ तर चोर डाकाहरुबाट हाम्रो रक्षा गर्ने बखत गद्दामा सुत्ने विदेशी कुकुरहरु काम लाग्दैनन् । स्वदेशी कुकुरहरु नै काम लाग्छन् ।’ पृथ्वीमा तीन प्रकारका रत्न छन् जल, अन्न र मीठो बचन वा सूक्ति । तर मूर्खहरुले पत्थरलाई रत्नको नाम दिएका छन् ।
सत्य मेरी आमा, ज्ञान मेरा पिता, धर्म मेरा दाजुभाइ, दया मेरी बहिनी, शान्ति मेरी पत्नी, क्षमा मेरो छोरो, यी ६ वटा मेरा बन्धु हुन । इनारमा हालेको बाल्टिन यदि झुक्यो भने पानी भरिएर बाहिर निस्कन्छ । जिन्दगीको गणित पनि यस्तै हो, जो झुक्छ उसले केही प्राप्त गर्छ । दादागिरी त मरेपछि पनि गरिन्छ, सबै पैदल हिँड्दै हुन्छन, आफू काँधमा बसिन्छ ।
निराशावादी मान्छे पोखिएको दूधको चिन्ता गर्छ, आशावादी मान्छे बचेको दूध हेरेर खुसी हुन्छ । तपाईंको धन गयो, घर गयो, जागिर गयो, तर चरित्र बाँकी छ, विद्वता बाँकी छ । त्यो भन्दा पनि बढी तपाईको सिंगो भोलि र भविष्य बाँकी छ । आशावादी मानिस घोडाको लिदी भेट्यो भने घोडा खोज्न दौडन्छ तर हार मान्दैन । kusenews बाट साभार गरिएकाे ।